फूल र काठ कुंडली Druids
आध्यात्मिक विकास, संख्यात्मक
पुरातन समयमा आधुनिक बेला बेलायत, स्विट्जरल्याण्ड, बेल्जियम, अस्ट्रिया र फ्रान्सको क्षेत्र रहस्यमय केल्टिक जनजातिकाहरूले बाँचिरहेका थिए। अरू कसैको जस्तै, उनीहरूको आफ्नै परंपरा, किंवदंतियों, मिथकहरू, परम्पराहरू, रहस्य, धर्म थियो। दुर्भाग्यवश, सीट को बारे मा धेरै सानो जानिन्छ - उनको जनजातीयहरुलाई उनको जीवन र विश्वव्यापी को बारे मा लिखित गवाही नहीं छोडे - उनको मान्छे को पुरा इतिहास मौखिक रूप देखि, पिताजी को छोरा ले प्रेषित गरियो।
निस्सन्देह, आज हामी तिनीहरूको बारेमा केही तथ्यहरू थाह छ, तर यो जानकारी पड़ोसियों वा सेल्ट्स - रोमीहरूको शत्रुहरूबाट प्राप्त भएको थियो।
यो निश्चितको लागि जानिन्छ कि क्याल्टिक समुदायहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू सधैं पूजाहारीहरू थिए, ड्रुइड भनिन्छ। कुनै पनि समस्याहरू समाधान गरिएका छन्, अन्तिम शब्द सधैं तिनीहरूसँग रहन्छ।
तर ड्रुइडहरू केवल पिजेरियाहरू थिएनन् जसले किल्टिक देवताहरूलाई सेवा गरे: उनीहरू जनजातिको सबैभन्दा बुद्धिमानी व्यक्ति थिए, ईश्वरीय र भक्तिमा संलग्न थिए, उनीहरूलाई कसरी नेतृत्व गर्ने भनेर थाहा थियो। डुब्सहरू अलौकिक क्षमताहरू चल्छन्।
यो पनि ज्ञात छ कि तिनीहरूले पवित्र ओक ग्राभहरू बुझे। त्यहाँ एउटा संस्करण हो जुन धेरै शब्द "ड्रुइड" ले सेल्टिक "ओक" बाट आउँछ। यसैले यो आश्चर्यचकित छैन कि सील्ट काठको एक वास्तविक कथन थियो, र उसलाई चोट पुर्याउने व्यक्तिलाई कष्टपूर्वक दण्डित गरिएको थियो। बार्कको पछाडि पछाडी पनि अपराधको रूपमा मानिएको थियो जसको कारण दोषी एक काटिएको घाइते रूखलाई नेभिले गर्दा पिटेको थियो, त्यस पछि अपराधी टंक वरपर घुमाईएको थियो, त्यसकारण दुर्भाग्यवशको प्रवेशले रूखको वरिपरि लुकेको थियो।
माथिको माथिबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ, ड्रुइड्स प्रकृति संग असाधारण निकटताको भिन्नता थियो, जसमा डुब्सको यस्तो लोकप्रिय कुरो आधारित छ।
कुल त्यहाँ यस कुरोको दुई प्रकारहरू छन् - तिनीहरू धेरै समान छन् र एउटै सिद्धान्तमा बनाइएका छन्। आश्चर्यजनक कुरा, यो कुंडली एकदम सही छ।
तिनीहरूका अधिक प्रसिद्धको बारेमा कुरा गरौं। पृथ्वीको नजिकको सूर्यको स्थान यसको आधार हो। यो Druids को काठ कुंडली हो, पेडहरू जुन प्रत्येक व्यक्तिको प्रकृति, विशेषताहरू र भाग्य मात्र निर्धारण गर्दैन, तर तिनीहरूका संरक्षक पनि छन्।
यस कुरोकोपको अनुसार, त्यहाँ2चरणहरू छन्, जसमध्ये प्रत्येक 18 अवधिहरू छन् - प्रत्येकका लागि एक चिन्ह। यी अवधि धेरै दिनको लागि अन्तिम छ, र तिनीहरू जोडा छन् - यो हो, प्रत्येक चरणमा एक समान अवधि हो। तर त्यहाँ4थप अवधिहरू छन् (र चिन्ह) - एक दिन प्रत्येक। तिनीहरू गर्मी र शीतकालीन सुल्लिस, शरद ऋतु र वसन्त इलिनोइसको दिनमा बिग्रन्छन्। यसरी, ड्रुइड्सको कुंडलीले 22 रूखका चिन्हहरू छन्।
प्रत्येक चिन्हले वर्षको निश्चित दिनसँग मेल खान्छ, जुन कुनै परिस्थितिमा परिवर्तन हुँदैन। त्यसकारण, ड्रुइड्सको कुरोकोप प्रयोग गर्न र उनीहरूको आफ्नै संर्रो रूख जान्न, यो तपाईंको जन्मको मिति जान्न पर्याप्त छ।
तथापि, आर्किकिपिपल कुरो एक मात्र अवस्थित एक मात्र होइन। केहि हद सम्म कम लोकप्रिय छ, तर बस को रूप मा दिलचस्प र मूल druids को पुष्प कुंडली हो। यो काठको रूपमा एउटै सिद्धान्तहरूमा आधारित छ, तर थप चिन्हहरू छन्। कुन फूलले एक व्यक्तिको चरित्र निर्धारण गर्छ - गुलाब, एक थोरै, एक लिली, एक अमरसेला वा म्यागोलिया - पत्ता लगाउन सजिलो छ: सबै जन्मको मितिको लागि। Druids को यो कुंडली 36 संकेतहरु - प्रत्येक को लागि एक दशक।
चम्मच र बांस लाकहरूमा सुझाव दिनुहोस्
संख्यात्मकता के हो? जन्मको मिति अनुसार संख्या: संख्याहरूको अर्थ
तपाईंको लाइनहरू हात र तिनीहरूको अर्थमा
टरोको लागि साँचो प्रेम साँचो
घरमा Shellac लागि सेट: तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने?
भोजमा Andreya Pervozvannogo मिति, समारोह। दिन प्रेरित एन्ड्रयू को मेमोरी को
विन्डोज7मा पृष्ठिंग फाईल कहां छ र यसलाई ठीक तरिकाले कन्फिगर गर्न सकिन्छ
घर अन्तर्गत जग को सही भर्ने
Deoxyribonucleic एसिड। मोडेल क्रिक्क र वटसन
विभिन्न मामलाहरुमा बिफिडब्याक्टेर को हालन कसरि गर्ने?
विकासकर्ता कन्सोल कसरी खोल्न?
आफ्नै हातले फायरवाल कसरी कन्फिगर गर्न?
फैब्रिक फीता: गुणहरू, आवेदन, सामग्रीसँग काम गर्ने विशेषताहरू
एक Katana के हो? विनिर्माण र फोटो